Xog: Maamulka Juba oo u kala jabay 3 garab (Arrimo xasaasi oo la isku hayo) |
Xog: Maamulka Juba oo u kala jabay 3 garab (Arrimo xasaasi oo la isku hayo)
Viagra Jelly without prescription, buy zithromax. Kismaayo (Somali Media) – Dhammaadkii sanadkii 2012 ayay Malayshiyaadkii Raaskambooni oo markii danbe isku badalay Maamulka Jubbaland iyo Ciidamadda Millateriga Kenya la wareegeen Kismaayo kaddib dhawr sano oo ciidamadda Al-shabaab ay gacanta ku hayeen Kismaayo.
Ciidamada isgarabsanaya ayaa gaaray Magaalada Kismaayo oo aysan ka dhicin gudaheeda dagaalo toos ah, waxaana xiligaas waxii ka danbeeyay soo baxayay hadalo kala duwan oo ku aadan kadib qabashada Kismaayo waxa dhici doona.
Wixii ka danbeyay xilgaas waxaa soo baxay Khilaafaad siyaasadeed oo salka ku haya cida dhanka siyaasada ka hagayso Jubbooyinka iyadoo sanadkii 2013 bilowgiisii halkaas looga dhawaaqay maamullo is feer-yaaca oo mid waliba uu gacan ka helayo dawladdo shisheeye iyo dad dano gaar ah leh.
Xiisada Kismaayo ayaa labadii todobaad ugu danbeysay ahayd (Xarig lama sitaan) waayo meel waxaa kasocday muranka Siyaasada ee u dhexeeya dhinacyada Barre Hiiraale oo doonaya inay awood Ciidan kusoo galaan Kismaayo. Dhan kalana waxaa soo baxay khilaaf u dhexeeya hoggaanka maamulka KMG ah ee Jubba, gaar ahaan, Madaxweyne ku xigeenka maamulkaas Jeneral C/laahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, Wasiirka Arrimaha gudaha Jubba, Jeneral Darwiish, waxaana khilaafaadkaasi ay salka ku hayaan arrimo siyaasadeed oo labada dhinac kala tabanayaan.
Darwiish iminka wuxuu ku suganyahay Magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya halkaasi wuxuu u joogaa khilaaf u dhexeeya isaga iyo Axmed Madobe kaddib markii ay beesha Darwiish iskaga baxday Kismaayo.
Sidoo kale waxaa jira Khilaaf kale oo u dhexeeya Macalin Maxamed Ibrahim iyo Sheekh Madoobe oo salka ku haya dhaqaalaha dakada Kismaayo kasoo xarooda oo la sheegaya labada dhinac inay isku qabsadeen maamulkiisa.
Dhinaca kale waxa sii yaraanaysa rajada Jeneral Fartaag ee la xiriirta inuu Kismaayo ku laabto kaddib markii uu dhawaan gobolka Gedo tagay, waxaana warar hoose oo aan helnay ay sheegayan in Fartaag iyo Axmed Madoobe aysan isku wanaagsanayn tan iyo markii uu Kismaayo tagay C/Weli.
Beesha Fartaag, ayaa si gaar ah loogu bartilmaameedsadaa taasi,waxaana la sheegay inuu cadaadis xooggan kala kulmay beeshiisa, oo dad badan ay maleeshiyada Raaskambooni uga dishay Kismaayo.
Dhinaca kale sida ay werisay Caasimada Online, waxaa shalay isaga baxay magaalada Kismaayo maleeshiyo ka kooban dhowr beelood oo ay ka mid yihiin Majeerteen iyo Dhulbahante, oo aan jecleysan ficillada maleeshiyada haysata magaalada.